Interrogò - Italienska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: interrogò (Italienska - Burmesiska)
ed egli li interrogò: «di che cosa discutete con loro?»
ထိုပုံထားသော ဥစ္စာအကြောင်းကို ဟေဇကိ သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသားတို့၌ မေးမြန်းလျှင်၊
lo interrogò con molte domande, ma gesù non gli rispose nulla
ထိုအခါ ဟေရုဒ်မင်းသည် ကိုယ်တော်ကို များစွာမေးမြန်းသော်လည်း အဘယ်စကားကိုမျှ ပြန်တော် မမူ။
ထိုအခါ ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်းသည် တပည့်တော်တို့ကို၎င်း၊ ဒေသနာတော်ကို၎င်း အကြောင်းပြု၍ ယေရှုကို မေးမြန်းစစ်ကြော၏။
un notabile lo interrogò: «maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna?»
အရာရှိတယောက်က၊ ကောင်းမြတ်သောဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကို အမွေခံရအံ့သောငှါ အကျွန်ုပ် သည် အဘယ်အမှုကို ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊
pilato si meravigliò che fosse gia morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo
pilato lo interrogò di nuovo: «non rispondi nulla? vedi di quante cose ti accusano!»
တဖန်ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် တခွန်းကိုမျှပြန်၍ မပြောသလောက်။ သင့်တဘက်၌ အဘယ်မျှ လောက် သက်သေခံကြသည်ကို ကြည့်ပါဟု မေးမြန်းပြောဆိုသော်လည်း၊
catturò un giovane della gente di succotelo interrogò; quegli gli mise per iscritto i nomi dei capiedegli anziani di succot: settantasette uomini
သုကုတ်မြို့သား လုလင်တယောက်ကို ဘမ်းမိ၍ မေးစစ်လျှင်၊ ထိုသူသည် သုကုတ်မြို့အရာရှိ၊ အသက်ကြီးသူခုနစ်ဆယ်ခုနစ်ယောက်တို့၏ အမည်အသီးအသီးတို့ကို ပြောလေ၏။
pilato lo interrogò: «sei tu il re dei giudei?». ed egli rispose: «tu lo dici»
ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် ယုဒရှင်ဘုရင်မှန်သလောဟု ယေရှုကိုမေးလျှင်၊ မင်းကြီးမေးသည်အတိုင်း မှန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
saul dunque interrogò dio: «devo scendere dietro i filistei? li consegnerai in mano di israele?». ma quel giorno non gli rispose
ရှောလုကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လိုက်ရပါမည်လော။ သူတို့ကို ဣသရေလလူတို့ လက်သို့ အပ်တော်မူမည်လောဟု ဘုရားသခင့်ထံ အခွင့်ပန်သော်လည်း၊ ထိုနေ့တွင် ပြန်တော်မမူ။
ကိုယ်တော်သည် တခွန်းမျှပြန်ပြောတော်မမူဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာနေ၏။ တဖန်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက၊ သင်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော မင်္ဂလာရှိသော ဘုရားသခင်၏သားတော် မှန်သလောဟု မြေးပြန်လျှင်၊
ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ဤသို့ဖြစ်သည်ကား၊ အဘယ်မျှလောက် ကြာပြီနည်းဟု သူငယ်၏အဘအား မေးတော်မူလျှင်၊ အဘက၊ ငယ်သော အရွယ်ကပင် ဖြစ်ပါ၏။
allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padroneedisse: «perché quest'oggi avete la faccia così triste?»
သင်တို့သည် ယနေ့အဘယ်ကြောင့် မျက်နှာ ညှိုးငယ်သနည်းဟု မိမိသခင်အိမ်၌ မိမိနှင့်အတူ အချုပ်ခံ နေရသော ဖါရောမင်း၏ အမတ်တို့အား မေး၏။
infatti il re di babilonia è fermo al bivio, all'inizio delle due strade, per interrogare le sorti: agita le frecce, interroga gli dei domestici, osserva il fegato
ဦးရစ်တော်ကိုပယ်၍ ရာဇသရဖူကို ချွတ်လော့။ နောက်တဖန် မရှိရ။ နိမ့်သောသူကိုချီးမြှောက်ရမည်။ မြင့်သောသူကို နှိမ့်ချရမည်။
interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui dio creò l'uomo sulla terraeda un'estremità dei cieli all'altra, vi fu mai cosa grande come questaesi udì mai cosa simileaquesta
ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ လူကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော နေ့မှစ၍၊ သင်တို့ မဖြစ်မှီ လွန်လေပြီးသော ကာလပတ်လုံး၊ မိုဃ်းကောင်းကင် တဘက်မှ တဘက်တိုင်အောင် မေးမြန်းကြလော့။ ဤမျှလောက် ကြီးသောအမှု ဖြစ်ဘူးသလော။ ဤကဲ့သို့ သော အမှု၏ သိတင်းကို ကြားဘူးသလော။
se vi interrogo, non mi risponderete
ငါမေးလျှင်လည်း သင်တို့သည် မဖြေဘဲ၊ ငါ့ကို မလွှတ်ဘဲနေကြလိမ့်မည်။
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် တရားအမှုကို ယဇ်ပုရောဟိတ်၌ မေးမြန်းရ မည်မှာ၊
stà sulla stradaeosserva, tu che abiti in aroer. interroga il fuggiascoelo scampato, domanda: che cosa è successo
အိုအာရော်မြို့သား၊ လမ်းနားမှာရပ်၍ ကြည့်ရှု လော့။ အဘယ်အမှုရှိသနည်းဟု၊ ပြေးသောယောက်ျားနှင့် အသက်လွတ်သော မိန်းမကိုမေးမြန်းလော့။
meaning of variety in tagalog (Engelska>Tagalog)erfolgloser (Tyska>Danska)پخش فیلم سکسی سوپر خارجی (Franska>Engelska)my heart belongs to you (Engelska>Malajiska)pagiging maalalahanin (Tagalog>Engelska)xx bfbangalisax (Kannada>Engelska)talambuhay ni celso al carunungan (Tagalog>Engelska)hinnaerinevused (Estniska>Finska)i pa ia ki ahau (Maori>Engelska)tinajita (Engelska>Spanska)sorry, maine aapko disturb kiya (Hindi>Engelska)सेक्सी वीडियो नंगा (Hindi>Engelska)很大的 (Kinesiska (förenklad)>Tadzjikiska)muchas gracias por tus esfuerzos (Spanska>Engelska)不能对一个世界宗教发动战争 (Kinesiska (förenklad)>Engelska)entro quando (Italienska>Engelska)saxi film punjabi (Hindi>Engelska)nakikipag pataasan (Tagalog>Engelska)ビネーテスト (Japanska>Engelska)即 (Kinesiska (förenklad)>Lettiska)withheld meaning (Engelska>Tagalog)سکس فیلمسکس سوپر ایرانی اصل (Franska>Engelska)헐~ (Koreanska>Engelska)transversely (Engelska>Arabiska)